थाहा खबर: नारायण गोपाल भन्थे : संगीत मानिसको लागि आधारभूत आवश्यकता हो
नारायण गोपाल भन्थे : संगीत मानिसको लागि आधारभूत आवश्यकता हो
काठमाडौं : केही मिठो बात गर, रात त्यसै ढल्किँदै छ, लौ सुन म भन्छु मेरो राम कहानी, मलाई नसोध कहाँ दुख्छ घाउ, तिम्रो जस्ताे मुटु मेरो पनि, म त लालिगुराँस भएछु, एउटा मान्छेको मायाले कति फरक पार्दछ जिन्दगीमा, यो सम्झिने मन छ म बिर्सुँ कसरी यी बाहेक पनि दर्जनौँ गीत छन् जसले नारायण गोपाललाई अहिलेसम्म पनि जीवितै राखेको छ।
वि.सं. १९९६ असोज १८ गते जन्मेका नारायण गोपाललाई स्वरसम्राट भनेर चिनिन्छ। उनी आजको पुस्ताका पनि धेरै गायकका आइडल र धेरै श्रोताका सबैभन्दा मनपर्ने गायक हुन्। जीवनको तीन दशकभन्दा बढी समय संगीत क्षेत्रमा व्यतित गरेका नारायण गोपालको वि.सं. २०४७ मंसिर १९ गते ५१ वर्षको उमेरमा निधन भएको हो।
नारायण गोपाल जगदम्बा श्री पुरस्कारबाट सम्मानित हुने पहिलो व्यक्ति पनि हुन्। वि.सं. २०४५ मा उक्त पुरस्कार पाएपछि टेलिभिजनका लागि गरिएको एक अन्तरवार्तामा उनले उक्त पुरस्कार र संगीतका बारेमा बोलेका छन्।
उक्त अन्तरवार्तामा नारायण गोपालले भनेका छन्, 'यो पुरस्कार पाउनु कुनै ठूलो कुरा होइन। महान कुरा होइन। तर मदन पुरस्कार गुठीले एकजना गायकलाई, संगीतको क्षेत्रलाई पनि यसरी पुरस्कार दिनु निकै नै खुशीलाग्दो कुरा हो। विशेष गरी किन खुशी लाग्छ भने कि गायकहरूले पनि साहित्यको सेवा गरिरहेको हुन्छ भन्ने कुरा थोरै मान्छेलाई मात्र थाहा थियो सायद।​
अब यो पुरस्कार लिँदा साहित्यको श्रीवृद्धिमा गायकहरूको पनि गहन भूमिका हुँदो रहेछ भन्ने कुरा धेरैलाई​ थाहा भयो। र मलाई के खुशी लाग्छ भने, मैले अस्ति पनि भनेँ, कि यद्यपि म आफैँ साहित्य अथवा भनौँ कथा कविता गीतहरू लेख्न जान्दिनँ र सक्दिनँ भनौँ। तर गीत गाएर पनि साहित्यको सेवा गरिरहेको रहेछु भन्ने कुरा यो पुरस्कार पाएपछि प्रष्ट भयो।
त्यसैले मैले आफूलाई धन्य ठानेँ कि मैले साहित्यको पनि सेवा गरिरहेछु साथै गीत पनि गाइरहेछु। यो पुरस्कारले मलाई हौसला दियो। मलाई विश्वास छ अझै पनि म भविष्यमा यो भन्दा अझै राम्रो साहित्य छानेर गीत गाउने प्रयास गर्छु।'
सोही अन्तरवार्तामा उनले आफ्नो लागि संगीत के हो भन्ने पनि बताएका छन्। उनले भनेका छन्, 'हुन त विभिन्न मान्छेहरूको विभिन्न धारणा हुन्छन्। युरोपतिर कुनै यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ संगीतबिना मान्छे बाँच्नै सक्दैन। जर्मनी भनौँ, इटालीको कुनै ठाउँ भनौँ, फ्रान्स नै भनौँ। संगीत उनीहरूको जीवनको एउटा अभिन्न अंग भइसकेको छ। अथवा यसरी भनौँ कि संगीत पनि उनीहरूको एउटा अधारभुत आवश्यकता जस्तै मान्छन्।
जहाँसम्म मेरो सवाल छ संगीत मेरो लागि एउटा खुराक हो। मानिलिउँ मैले गीत गाउन सकिन र संगीतदेखि मलाई टाढा राखियो भने मेरो जीवन एकदमै निरश हुन्छ। व्यर्थको हुन्छ। म के सोच्छु भने संगीत मानिसको लागि एउटा नभइ नहुने विधा हो। किनभने यो जीवन दर्शाउने कलाको रुपमा भर्खर विकास भइरहेको छ। यसलाई मात्र संगीत नठानेर मानिसको लागि आधारभुत आवश्यकता हो भन्ने म ठान्दछु।'
अहिलेसम्म यहाँले कति गीत गाउनुभएको छ? भन्ने प्रश्नमा नारायण गोपालले भनेका छन्, 'अँ, हेर्नुस् गीत मैले धेरै गाएको छैन। मुस्किलले २/३ सय जति होला। ओपेरा, फिल्म सबै गर्‍यो भने ४/५ सय जति पुग्ला होइन भने क्यासेट र डिस्क मात्रै गर्दा २ सय पनि मुस्किलले पुग्छ कि जस्तो लाग्छ। म थोरै गीत गाउँछु किनभने साहित्य राम्रो म पाउँदिनँ। गीत मात्रै बजेर हुँदैन त्यसको लागि कविता पनि राम्रो हुनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा छ।'
आफूलाई मनपर्ने गीतको बारेमा सोध्दा उनले भनेका छन्, 'यो प्रश्न मलाई धेरैले सोधिसके। तर, खै मैले अहिलेसम्म पनि भन्न सकेको छैन कि मेरो कुन चाहिँ विशेष गीत मलाई मन पर्छ भनेर। खास म भन्न सक्दिनँ। कुनै एउटा गीतलाई राम्रो भनौँ भने सायद मैले भुल गरिरा'छु कि जस्तो लाग्छ। किनभने मलाई एकछिनपछि फेरि अर्को गीत पनि राम्रो लाग्छ।'
मन्त्री बनाउने काम प्रधानमन्त्रीको हो‚ प्रधानन्यायाधीशको होइन : जबरा